जर्मनीबाट बेलायतको लागि कार आयात गर्दै | मेरो कार आयात
जर्मनीबाट युनाइटेड किंगडममा तपाईंको सवारी साधन आयात गर्दै
मेरो कार आयातले जर्मनीबाट सवारी दर्ता गर्न ढोका-ढोका दर्ता सेवा प्रस्ताव गर्दछ
हाम्रो जर्मन सवारी साधन उद्धरणहरू पूर्ण समावेशी छन् र तपाईंको आवश्यकतामा पूर्ण रूपमा आधारित छन्। तपाईं यस पृष्ठमा तपाईंको सवारी साधनको आयात प्रक्रियाको बारेमा अधिक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर स्टाफको सदस्यको साथ सम्पर्कमा बस्न र बोल्न हिचकिचाउनुहोस्।
ढोकामा दर्ता दर्ता
यदि तपाईं युनाइटेड किंगडममा आफ्नो गाडी आयात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने उद्धरण फारम भर्न हिचकिचाउनुहोस्। कृपया तपाईंको जर्मन गाडीको बारेमा सकेसम्म धेरै विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस् र हामी २ 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा रहनेछौं। एक उद्धरण प्राप्त
जर्मनीबाट युनाइटेड किंगडममा तपाईंको गाडी पाउदै
जर्मनीबाट युनाइटेड किंगडममा तपाईंको गाडी ढुवानी गर्नु भनेको तपाईंको सवारी साधन आयात प्रक्रियाको पहिलो चरण हो
हामी जर्मनीबाट दर्ता गर्ने अधिकांश कारहरू युनाइटेड किंगडममा पहिले नै छन्। जहाँसम्म, यदि तपाईंलाई यातायात आवश्यक छ भने तपाईंको उद्धरण अनुरोधमा उल्लेख गर्न नहिचकिचाउनुहोस् कि हामीलाई गाडी स collect्कलन गर्न आवश्यक छ। सबै वाहनहरू युनाइटेड किंगडमको ट्रान्जिटको बखत पूर्ण बिमा हुन्छन् र हामी सबै भन्सार एन्ट्री पेपरवर्कको ख्याल राख्छौं र यातायातको सबै व्यवस्थित गर्दछौं तपाईंको सवारी साधन आयात गर्न यसलाई एक साधारण प्रक्रिया बनाउँदै।
हामी जर्मनीमा तपाईंको गाडी स collect्कलन गर्दछौं या तो संलग्न यातायात वा सवारी साधन ट्रान्सपोर्टर प्रयोग गरेर। यो तपाईंको वाहन युनाइटेड किंगडम आउन केहि दिन पहिले हुन सक्छ।
हामी तपाईको गाडी सुरक्षित रूपमा युनाइटेड किंगडममा पाउनेछौं र तपाईको तर्फबाट NOVA पूरा गर्नेछौं।
यदि तपाईंको वाहन क्यासल डोनिंग्टनमा हाम्रो परिसरमा आउँदैछ भने हामी सुरक्षित रूपमा तपाईंको गाडी अनलोड र भण्डार गर्नेछौं परिमार्जनका लागि तालिकाबद्ध गर्न तयार। केहि केसहरूमा सवारी तपाईलाई सिधा जान सक्छ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि जब तपाईं आफ्नो गाडी पठाउन सक्नुहुन्छ, सडक फ्रेट जर्मनीबाट युनाइटेड किंगडममा तपाईंको गाडी पुग्ने सब भन्दा छिटो तरीका हो। जर्मनीबाट तपाईंको गाडीको यातायातको सम्बन्धमा सम्पर्कमा आउन नहिचकिचाउनुहोस् यदि तपाईंको जर्मन गाडी युकेमा यातायातको सम्बन्धमा केहि प्रश्नहरू छन् भने।
जर्मनीबाट तपाईंको सवारी साधन आयात गर्न तपाईंले कति कर तिर्नु पर्छ?
युनाइटेड किंगडममा प्रवेश गर्ने सबै सवारी साधनहरू जुन उनीहरूले दर्ता गरिदिएका छन् उनीहरूले पहिले नै कर तिर्नु पर्छ। हामी तपाईंको गाडीको आयातबाट तनाव हटाउन सम्पूर्ण प्रक्रियाको साथ सहयोग प्रस्ताव गर्दछौं।
HMRC को आवश्यकता छ कि तपाईंले कुनै कर बाँकी छैन भनेर प्रमाणित गर्न १ 14 दिन भित्र यूनाइटेड किंगडममा गाडी आउँदा गाडीको लागि NOVA पूरा गर्नुहोस्।
हामी तपाईंको तर्फबाट सबमिशन तयार गर्नेछौं यसको मतलब तपाईंको गाडी दर्ता गर्न पछि कुनै समस्या हुनेछैन।
जर्मनीबाट बेलायतमा कार आयात गर्दा, तपाईं पूरै कर मुक्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन सवारी6महिना भन्दा पुरानो हो र नयाँबाट 6000००० किलोमिटरमा कभर गरिएको छ।
ब्रेक्सिट र कर प्रभावको बारेमा चिन्तितहरूको लागि। हाल युनाइटेड किंगडममा आयात हुने सवारी साधनहरू अझै पनि ईयूको'१ डिसेम्बर २०२० सम्मको संक्रमण अवधिमा 'मालको स्वतन्त्र आन्दोलन' द्वारा समेटिएको छ।
मेरो कार आयातले तपाईको जर्मन सवारीलाई परिमार्जन गर्न सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहयोग गर्न सक्छ युनाइटेड किंगडम भित्र प्रयोगको लागि अनुरूप हुन। तपाईंको गाडीको उमेरमा निर्भर गर्दै दर्ताका लागि मार्ग केही फरक छ, तपाईं तल के समावेश छ भनेर थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ:
के दस वर्ष भन्दा कम उमेरको गाडी छ?
जर्मनीबाट बायाँ ह्यान्ड ड्राइभ कारहरूलाई केही परिमार्जनहरू आवाश्यक हुन्छन् जसमा हेडलाइट ढाँचामा आउने ट्राफिकको उज्यालोपनाबाट जोगिन, स्पीडो प्रति घण्टा पढ्नको लागि माईल प्रदर्शन गर्न र रियर फोग लाइट यदि यो पहिले नै सर्वव्यापी रूपमा अनुरूप छैन भने।
के दस वर्ष भन्दा पुरानो गाडी छ?
जर्मनीबाट १० बर्ष भन्दा पुरानो सवारी साधनहरूका लागि, प्राय: कार र क्लासिकहरू अनुमोदन छुट प्रकारका हुन्, तर अझै पनि MOT परीक्षण र रेजिष्ट्रेसन अघि केही संशोधनहरूको आवश्यक पर्दछ। परिमार्जन उमेरमा निर्भर गर्दछ तर सामान्यतया हेडलाइटहरू र रियर फोग प्रकाशमा हुन्छ। कहिलेकाँही जर्मनीबाट आएका सवारी सवारीहरूलाई पनि गति मोटरमा परिमार्जन आवश्यक हुन्छ यदि यो प्रति घण्टा माइलमा दर्ता हुँदैन।
यदि तपाईंको वाहन पहिले नै युनाइटेड किंगडममा छ र तपाईंले दर्ता प्रक्रियामा मुद्दाहरूको सामना गरिरहनु भएको छ भने हामी टाढा तपाईंको जर्मन गाडी दर्ता गर्न मद्दत गर्न पाउँदा हामी खुसी छौं। १० बर्ष भन्दा बढी पुरानो सवारी साधनहरूका लागि तपाईंको स्थानीय ग्यारेजले सवारीलाई परिमार्जन गर्न काम गर्न सक्दछ। हामी त्यसपछि टाढा सबै कागजी कार्यहरूको ख्याल राख्छौं र तपाईंलाई नम्बर प्लेटहरू तपाईंमा पोष्ट गर्दछौं। कृपया नोट गर्नुहोस् कि यदि तपाईं ड्राइभि distance्ग दूरीमा हुनुहुन्छ भने हामी क्यासल डोनिंग्टनको हाम्रो परिसरमा परिमार्जन गर्न एक दिन अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गर्न पाउँदा बढी खुसी छौं।
जब हामी सफलतापूर्वक हाम्रो ग्राहकहरु लाई मेरो आफ्नै कार आयात समर्पित को उपयोग गर्न को लागी पैरवी गरे DVLA खाता प्रबन्धक, परीक्षण चरण पार गर्दा, दर्ता धेरै छिटो स्वीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने सुनिश्चित गरेर फ्रान्सेली सवारी दर्ता वैकल्पिक विधिहरू भन्दा छिटो छ।
एक सुव्यवस्थित, सुविधाजनक प्रक्रिया जुन धेरै बर्षहरूमा तयार गरिएको छ, जर्मनीबाट युकेमा कार आयात गर्न सजिलो हुन सक्दैन। तपाइँको आवश्यकताहरु को माध्यम बाट चलाउन र हाम्रो प्रस्ताव को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, हामीलाई आज +44 (०) १0२ 1332१ ०81२२ मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
हामी जर्मन गाडीहरूको लागि पूर्ण आयात सेवा प्रस्ताव गर्दछौं
जर्मन वाहनका प्रकारहरू